Yakha i-Custom Startpage yakho nge-Google Apps
NgoLwesithathu, Agasti 22, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla ebusuku nginqume ukuthatha ikhefu kepha ngisafuna ukufaka ipizazz ngeyami umsebenzi omusha. Yiqembu elincane engisebenza nalo kodwa kuhle ukuthi livulekele kangakanani ubuchwepheshe. Ngisuka nje ku-bat, ngihambise imibhalo yethu eminingi okwabelwana ngayo ngaya ku-Google Docs. Kwakuyisinyathelo esihle kakhulu njengoba sinemithombo embalwa engasogwini futhi. Manje sonke sinedokhumenti efanayo nezibuyekezo zakamuva - kusebenza kakhulu.
Umngane wami uBill wangibuza ukuthi kungani ngingaqhamukanga Izinhlelo zokusebenza ze-Google. Ubalule omunye umngani wakhe bobabili, uDale, obekade eyisebenzisela ukusungula ibhizinisi lomkakhe futhi bayalithanda. Ngakho-ke kulobubusuku ngenze okuthile ngidlala ngakho. Kancane kancane, kepha kungahle kusebenze… Ngizoqhubeka nokuyihlola ukuze ngibone.
Ngakha into eyodwa epholile impela namhlanje kusihlwa, noma kunjalo. I-Google Apps ikuvumela ukuthi wakhe ikhasi lokuqala elenziwe ngokwezifiso futhi ikunikeze ne DNS izilungiselelo uma kwenzeka ufuna ukuyakha ngqo kusayithi lakho! Isibonelo, ungenza ikhasi http://start.yoursite.com! Namuhla ebusuku ngakhe iPatronpath Start Page:
Imibala yethu yelogo nemikhiqizo ihlobisa ikhasi.
Okukhiyiwe kukholamu yesobunxele okubandakanya Ikhalenda elijwayelekile, isimo sezulu sendawo, futhi-ke nokuphakelayo kweNational Restaurant Association!
Amakholomu ama-2 angakwesokudla angenziwa ngendlela oyifisayo umuntu angafuna, njengaye IGoogle.
Unyaweni unezixhumanisi ezithile ezingokwezifiso kuwo kumawebhusayithi wethu ambalwa.
Ayisiyikhulu noma i-splashy, kepha imizuzu embalwa yokudlala ngethuluzi lamahhala, kuhle kakhulu!
Ingabe Imidiya Yezenhlalo Ingalapha Ukucindezeleka?
Aug 27, 2007 ngo-9: 41 PM
Kulungile. Ngisetha le nto izinyanga ezimbalwa emuva 🙂
Sep 10, 2007 ku-10: 03 AM
Ngingancoma ama-pageflakes noma ama-netvibes kunoma ngubani. Ngisebenzisa amakhekhe wekhasi ukuphatha amakheli amaningi e-imeyili futhi ngibhalisele kuma-blogs angama-30. Kwenza kube lula kakhulu!